Heeso Ingiriisi iyo sidoo kale filimada waxaa ku oolka ah iyo daawaday adduunka oo dhan iyo sabab la mid ah waxaa sidoo kale in la xusay in dadka isticmaala ay arrintan la xiriira u baahan tahay in la hubiyo in lyrics aan la fahamsan yahay oo keliya laakiin user sidoo kale uu helo ugu wanaagsan yahay iyo gobolka fur-in tahay in arrintan la xiriira si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in ka siib-in ay ku rakiban yahay mid aan kaliya ay daboolayaan baahiyaha iyo baahida dadka ka dhigi laakiin sidoo kale ka heli sameeyo hawsha aan mar gudahood. Tutorial Tani waa dhan oo ku saabsan lyrics ka furaysto-in in lagu rakibi karo in lagu windows media player.
Si aad u hubiso in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada farshaxanka ee la xiriirta lyrics ka furaysto-in liiska qaybtan waa in la sameeyo laga heli karaa si loo hubiyo in user helo ugu wanaagsan ee lagu sameeyey wax waqti ah gudahood oo dhan ka dhigi baahan yahay sidoo kale waa in la sameeyo iyadoo la kaashanayo oo ka mid ah marka ay timaado akhriska lyrics ah. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ee arrintan la xiriira, waa in sidoo kale la hubiyo in ka siib-in ay halkan ku xusan waxa loo xiraa ka URL in lagu soo sheegnay sida ay tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee jeer oo dhan iyo sidaas darteed waxaa sidoo kale in la xuso in ka siib-in ay tahay in lagu soo sheegnay
Halkan waa kuwa aan kaliya marka updated ahaantood, laakiin sidoo kale in la hubiyo in shaqeynta ah ee ka fur-in marna waxyeelleeyey. Sidaa darteed waa in la ogaadaa in user in ay raacaan liiska si ay u helaan hawsha lagu sameeyey qaab iyo caqabad kasta oo aan sidii u hubiyo in user helo natiijada ugu fiican ee aan wax arrintan oo dhibaato ka dhigi doonaa. Waxaa sidoo kale in la xuso in qaybtii dambe ee tutorial wuxuu baari doonaa muhiimadda ay lyrics ka furaysto-in xitaa qoto dheer:
1. Lyrics koronto-in
Waa kuwa ugu caadiga ah iyo kan gobolka ee barnaamijka fanka in lagala soo bixi karo in lagu hubiyo in wixii kaloo la sameeyo iyada oo aan arin kasta oo user helo natiijada ugu fiican ee la xiriirta lyrics ah in lagu ciyaaray. Waxaa sidoo kale in la xuso in dadka isticmaala ee la xiriirta waa in sidoo kale la hubiyo in ugu fiican iyo kan gobolka ee barnaamijka fanka la soo bixi URL http://www.lyricsplugin.com/ sida ay website-ka rasmiga ah oo ay ku dhiirigelinayaan oo ka mid ah fur-in ay sidoo kale loo magacaabay la mid ah. Sawirka ah fur-in la soo sawiray sida soo socota:
Sidoo kale waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka barnaamijyada farshaxanka in lagala soo bixi karo in lagu hubiyo in user ma aha oo kaliya arkaa lyrics shaashadda laakiin u shaqeeya oo sidoo kale sare loo qaadi karaa si loo hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ah natiijooyinka tahay in arrintan la xiriira ka. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in ugu fiican ayaa lagu rakibay marka link Crinsoft rasmi ah oo uu soo kor ku xusan waxaa la socda si aad u hesho wixii kaloo sameeyey qaab sameeyo. Tani lyric fur-in sidoo kale lagu rakibi karo ee qalabka sida mobile jiro version la qaadan karo iyo sidoo kale.
Sidoo kale waa mid ka mid ah barnaamijyada in la hubiyo in user helo ugu fiican iyo gobolka featuee tahay lagu rakibay oo lacag la'aan ah sida ka dhigi lyrics ka furaysto-in gabi ahaanba waa bilaa lacag iyo user wuxuu u baahan yahay in aan waxba lagu bixiyo rakibo iyo sidoo . Si aad u hesho sida ugu fiican u sameeyey waxa uu ku taliyay in la raaco link ah oo uu soo kor ku xusan si aad u hubiso in barnaamijka la soo bixi iyo sidoo kale waa in la ogaadaa in user waa in la hubiyo in dardar la raacay si aad u hesho wixii kaloo loogu sameeyo sameeyo.
Next jiilka software
Sidoo kale waa mid ka mid ah barnaamijyada in uu leeyahay muuqaalada badan oo gundhig u gudahood, sidaas darteed waxaa muhiim ah in la ogaado in muuqaalada oo dhan gacan ka gaysato niyad samida guud iyo wacnaan ah lyrics ka furaysto-in uu soo gundhig si loo hubiyo in ugu wanaagsan iyo gobolka adeegga tahay waxaa kaliya ma bixiyo laakiin user sidoo kale uu helo wixii kaloo loogu sameeyey oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ee arrintan la xiriira, waa in sidoo kale la hubiyo in ay fur-in la geliyo ka dib markii brannmur ayaa naafo.
5. Articles lyrics bareesada-in
Horumarinta ee this fur-in ayaa xaqiijiyey in user helo natiijada ugu wanaagsan iyo sidoo kale helo wixii kaloo sameeyey qaab. Waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka barnaamijyada farshaxanka oo lagu soo diyaariyay si ay u hubiyaan in user helo shaqada sameeyo oo aan wax arrintan iyo dhibaatada. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in ay hubiyaan in ay ka siib-in loo isticmaalaa oo kaliya in lagu daro daaqadaha sida uu yahay saldhigga kaliya daaqadaha iyo is-dhexgalka ee la soo dhufto ee kale ee sidoo kale waa ay socdaan si loo hubiyo in user helo shaqo sameeyey sameeyo iyada oo aan arin kasta laakiinse iyagu ma ay weli waxaa laga heli karaa oo dhowaan la sameyn doonaa.
Lyrics ayaa surin-in la hubiyo in user helo ugu fiican iyo kan gobolka ee shaqada farshaxanka lagu sameeyey qaab iyo wuxuu noqon karaa mid aad u anfacaya haddii ay ku rakiban yihiin hab sax ah iyo kuwa ayaa lagula talinayaa in la siiyaa mudnaan ka dhigi kartaa iyo haddii ay aan la markaas user ma awoodi doonaan inay helaan shaqeynayaan feature buuxa sida ay wixii ayaa lagu daray in kasta oo lyric waa samaysay fur-in uu soo sheegnay in liiska kor ku xusan. User ayaa sidoo kale u baahan tahay si ay u hubiyaan in functionalities waxaa lagu tijaabiyaa iyo haddii ay jirto arin kasta oo arrintan la xiriira markaas user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in kale fur-in loo xiraa sida fursadaha aad u badan ee user a sinlge yihiin.
> Resource > Windows > Top 5 lyrics surin-in daaqado media player